Madaxweynaha Somaliland oo ka xumaaday cunaqabatentii hubka ee Soomaaliya qaaday. |
Hogaanka Maamulka Somaliland, Axmed Maxamed Maxmuud Siilaanyo, ayaa waxa uu shaaciyay in ay si aad ah uga xunyihiin cuna qabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya, arintaas oo uu ku sheegay mid aan laga fiirsan.
Siilaanyo ayaa waxa uu niyad jab ka muujiyay horumarka iyo hanaanka geedi socdoska soo kabashada Soomaaliya, maadaama ay iyaga ay qasab ku noqoneyso in ay Soomaali weyn wax laqabsadaan hadii koofurta Soomaaliya ay xasisho.
“xayiraada Hubka in laga qaado maaheyn dowlada Soomaaliya. Waxaana cadeyneynaa in aanan ku qanacsaneyn”, sidaa Hogaanka Maamulka Somaliland, Axmed Maxamed Maxmuud Siilaanyo, ayaa ku celceliyay.
Horay wasiirka gaashaandhigga Somalilnad iyo maamulka uu hogaamiyo Faroole ee Puntiland ayaa waxa ay u qoonsadeen cuna qabateynta hubka ee laga rogay Soomaaliya labaatan sano kadib iyaga oo dhamaantood ay ka muuqatay diidmadooda horukaca Soomaaliya, sida ay qabaan xeel dheerayaal wax badan ka qoray siyaasada Soomaaliya.
Siilaanyo ayaa hadalkaan jeediay xilli uu safar ugu baxayay dalka Turkiga, halkaasi oo uu sheegay in uu kula kulmayo R/wasaaraha Turkiga, iyada oo aan la’ogeyn waxa ay kawada hadli karaan, hasa yeeshee waxaa marag madoonta ah in Turkigu uu xusul duub ugu jiro in lahelo Soomaali mid ah, ayna Suuqaragal tahay in Siilaanyo lagu soo waaniyo sidii ay Soomaalida inteeda kale ugu milmi lahaayeen.
Dhawaan Soomaaliya waxaa mudo sanad ah laga qaaday cuna qabateyntii hubka ee labaatanka sano saarneed si ay dib ugu dhisato ciidamadeeda ayna awood ugu yeelato wiiqida Shabaab iyo Al-qaacida, arintaas oo ay soo dhaweeyeen dhamaan Soomaalida samaha jecel.